Winston Tubman: Shirku u Baaqan Maayo Ka Bixitaanka C/Qaasim
SOMALITALK.COM | July 30, 2003
Wararka ka imanaya Nairobi ayaa shaaca ka qaaday in Winston Tubman oo ah wakiilka xoghaya qaramada midoobey ee Soomaaliya uu sheegay in shirka dib u heshiisiinta Soomaalidu uusan isu taagayn ka bixitaanka uu ka baxay madaxweynaha DKG, C/Qaasim Salaad Xassan oo shirka iskaga baxay Arbaca July 30.
Inkasta oo uu Tubman qiray in maqnaanshaha C/Qaasim ay arimaha adkaynayaan, hadana waxa uu sheegay in wada hadalku uu soconayo oo uusan istaagayn shirku.
Waxaa lagu soo waramay in C/Qaasim uu maanta sheegay in uu joojin doono ka qayb galkiisii shirka ilaa si dhamaystiran wax looga qabto waxyaabaha ay ka cabanayaan, taas oo uu sheegay in uu go'aankaas qaatay kaddib markii ay IGAD (oo ka kooban Ethiopia, Kenya iyo Djibouti) arimahaas iska indha saabtay ama yaraysatay.
C/Qaasim waxyaabaha uu rabo in si xeel dheer looga hadlo waxaa kamid ah:
Magaca ay qaadan doonto dawlada la dhisi doono
waxa ay noqon doonto xaalada maamul goboleedyada hadda jira
Inta uu ka koobnaan doono baarlamaanka la soo dhis doono
Sida loo soo xuli doono xubnaha Baarlamaanka iyo
Sababta gobolada Woqooyi ee Soomaaliya loogu soo dari waayey shirka
C/Qaasim waxa uu si cad u sheegay in IGAD kusoo darid la 'aanta aysan shirka kusoo darin gobolada Woqooyi ee Soomaaliya ay tahay kala tafaraaruqinta Jamhuuriyadda Soomaaliya, taas oo uu C/Qaasim ku sheegay in ay kasoo horjeedo rabitaanka shacabka Soomaaliyeed.
SIYAASIGA SOOMAALIGA AH AMMAAN MA MUDAN YAHAY
Waa qaybtii 2ad ee taxanihii Siyaasadda ee Fahad Yaasiin Guji July 30
Waxaana waraka ugu dameebyey ay cadeeyeen in C/Qaasim uu eedayn kulul dusha uga tuuray xubno kamid ah ururka IGAD, kuwaas oo uu ku eedeeyey in ay kala qaybinayaan dawladda KMG ah.
Waxaa kale oo lagu soo waramay in wasiirka saxaafada DKG, Cabdiraxmaan Ibbi uu sheegay in C/Qaasim uu shirka ku soo laaban doono marka ugu horeysa ee wax laga qabto arimaha ay ka cabanayaan.
Dhanka kale Ra'iisul wasaaraha DKG, Xasan Abshir Faarax, iyo afhayeenka baarlamaanka, Cabdallah Deerow Isaaq, waxa ay weli joogaan Nairobi, waxayna si cad uga soo hor jeesteen kabixitaanka uu C/Qaasim ka baxay shirka. C/Qaasim waxa uu arintaas ka yiri in aysan (Xasan iyo Deerow) waxa awood-sharciyeed u lahayn in ay saxiixaan heshiis ay ku metelayaan dawlada KMG.
July 14 keedii ayey ahayd markii M.Cabdi Yuusuf iyo Cali Baashi oo ka kala socda labada gole ee DKG ah ay dalbadeen in goobta shirka ee Nairobi laga saaro Xasan Abshir iyo Cabdalla Deerow waayo ayey yiraahdeen ma matalaan DKG ah, taasna labada nin ee ka mid ah saddexda ugu sareeya DKG waa diideen.
Shirka dib u heshiisiinta Soomalaida oo Eldoret ka bilowday 15 October 2002 ayaa soo maray heerar iyo marxalado kala duwan, marxaladahaas oo ay kamid ahayd in shirka loo soo raro Mbagathi, Nairobi oo uu hadda ka socdo aydoo lagu jiro bishii 9aad ee shirkaas. Marxaladaha ugu dambeeyey ee shirka waxaa kamid ah in 5tii July 2003 lagu heshiiyey in xubnaha baarlamaanka Soomaaliyeed ee dawlada la dhisi doono ay noqdaan 351, muddada ay dawladaasi jiri doontaana ay noqoto 4 sano, taas oo xubnaha baarlamaanka ay soo xuli doonaan saxiixayaashii October 27, 2002. Heshiiskaas waxaa ku gacan sayray C/Qaasim Salaad Xasan, asagoo ku tilmaamay mid aysan dawladiisu ogolayn. Diidmadii C/Qaasimna waxaa markiiba Ganafka ku dhuftay Xasan Abshir Faarax iyo Cabdalla Deerow Isaaq oo ka tirsan DKMG kaddib markii ay 7dii July 2003 shir jaraa'did ku qabteen xarunta uu ka socdo shirku ee Mbagathi ayna sheegeen in ay ayidsan yihiin go'aanka shirka.
Waa koorso lacag la'aan ah oo ka bilaabatay SomaliTalk.com, waxaadna koorsadaas ku baran doontaa sidii aad u alifi lahayd barnaamijyada... GUJI..
DKMG waxaa mudadii la doortay ku egtahay bisha Agoosto ee soo socota, taas oo ay u buuxsami doonto mudadeedii saddexda sano ahayd, ayadoo taasi jirto ayaa waxaa muuqata in khilaaf weyni soo kala dhex galay saddexda nin uu ugu sareeya DKG.
Soomaaliya malahayn dawlad dhexe ilaa bilowgii sannadkii 1991, ilaa waqtigaas shacabka Soomaaliyeed waxay ku kala firdheen daafaha dunida, mudadaas waxaa la xaalufiyey dhirtii dalka Soomaaliya oo laga dhigay dhuxul la dhoofiyo, waxa kale oo cad in sun halis ah lagu aasay daafaha iyo gudaha dalka Soomaaliya, sida ku cad warbixintii dheerayd sannadkii 2000 uu qoray Dr. Bashiir Sh. Maxamed, labadan arimood ee xaalufinta iyo sunta waa 'dagaalka hurda ama dagaalka dahsoon' ee Soomaaliya, kuwaas oo cawaaqibkooda lagu baraarugi doono marka la helo dawlad xaqiiqo ahaan u dersi karta arimaha rasmiga ah ee saamaynta ku yeelan kara shacabka Soomaaliyeed. [Akhr meelah aay suntu kag aduugan tahay Soomaaliya: Guji http://somalitalk.com/sun ]
ISHA: SOMALIA NEWS: TODAY